Mihanaka ny andiam-balala any amin’ny distrikan’i Bekily amin’izao fotoana izao. Ripaka ny voly tsako (katsaka), tsy misy antenaina intsony ny tantsaha mpamboly ka manaitra ny tompon’andraikitra ao amin’ny sampandraharaha miady amin’ny valala ny any an-toerana. Eo ny fihanaky ny valala, miampy ny asan’ny malaso, tra-doza roa ny mponina any amin’ny distrikan’i Bekily : loza voajanahary sy ny asa ratsin’ny olombelona. Olana goavana koa ny tsy fisian’ny orana sy tsy fahitana fanafody famonoam-biby fiarovana ny voly.
Nanaovana famelabelaran-kevitra tao Miandrivazo ny momba ny “Tetikasa Fihariana”. Nitondra fanazavana sy nanoro lalana momba izany ny Antenimieran’ny varotra any Menabe. Tonga nanatrika ny fotoana ny sokajin’olona samihafa, tanora, ray aman-dreny, tantsaha, nihaino fanazavana amin’ny antsipiriany mahakasika izany “Tetikasa Fihariana” izany. Liana amin’io tetikasa io ny maro, indrindra ny tanora, izay misy amin’izy ireo nilaza ny faniriany hanitatra ny voly tsaramaso, ny hafa hanatsara ny fiompiana kisoa. Nitondrana fanazavana toy izany koa ny any amin’i distrikan’i Manja, hotohizana any Mahabo sy Belo Amoron’i Tsiribihina.
Maro amin’ireo mpiompy omby any Vangaindrano no nisalasala rehefa nambara fa hapetaka ny kavin’omby. Tsy mazava amin’ny maro ny antony, ka nangataka izy ireo ny hanemorana ny fametahana izany. Nambara tamin’izy ireo anefa fa ho fiarovana amin’ny halatr’omby ny antony fametahana izany kavin’omby izany, satria misy “code” io kavina io, koa na aiza na aiza misy ilay omby very, fantatra ny fiaviany. Anisan’ny distrika be halatr’omby indrindra ny any Vangaindrano, faritra Atsimo Atsinanana, ka izao nampidirina anatin’ny laharam-pahamehana izao ny fiarovana ny omby.